Aragtidayda ugu horreysa ee Ubuntu - Ikkaro
Inicio >> Software >> Linux >> Aragtidayda ugu horreysa ee Ubuntu
Waxaan aaminsanahay in wax kasta oo ku saabsan Linux ay dhib badan tahay, waxayna ku qaadatay xirfado kumbuyuutar oo ballaadhan isticmaalka. Oo waxaa ii soo baxday in aan la kulmay nidaamka qalliinka loogu talagalay isticmaalaha caadiga ah, oo u dhigma ama ka fudud in loo isticmaalo marka loo eego daaqadaha. Uma baahnin in aan isticmaalo qadka amarka hal mar.
Faa'iidooyinka aan ka helay Ubuntu.
Waxay leedahay laba baarar oo shaqeynaya, mid ka hooseeya iyo mid ka sareeya, laba toddobaad gudahoodna aniga ayay muhiim ii noqotay. Hadda markaan isticmaalo kombiyuutar daaqado leh, baarka labaad ayaa la la'yahay.
Waxay ku timid horay loo sii rakibay Openoffice iyo barnaamijyo badan oo badan sida duubayaasha, sawir qaadeyaasha, sawirrada, iwm. Isla marka aan rakibno ayaan shaqada bilaabi karnaa.
Aad bay uga deggan tahay. Waxaan furey kumbuyuutarka si aan isugu dayo inaan sudho, daaqado ayaan ku guuleystey. laakiin Ubuntu xilligan, maya, waxaa jirtay hal mar oo keliya oo barnaamij fashilmay, mana uusan shaqeyn, laakiin nagama hor istaagin inaan sii wadno inta hartay.
Way ka sahlan tahay in barnaamijyo laga helo Ubuntu marka loo eego daaqadaha. Qof kastaa wuu ogyahay codsiyada waaweyn ee daaqadaha goob kasta, laakiin waa la bixiyaa, ama waa la iibsadaa ama waa inaad raadisaa nooc la jabsaday, dildilaacyo iyo waxyaabo yaab leh. Ubuntu, ku dhowaad barnaamij kastaa wuxuu leeyahay dhiggiisa, waxaad gujisaa xarunta softiweerka, guji rakibidda iyo voila, barnaamijka loo isticmaalo, iyo cusbooneysiinta joogtada ah.
Waxaad u isticmaali kartaa barnaamijyada daaqadahaHaa, haddii aan ugu baahanahay khamri waxaan u isticmaali karnaa barnaamijyo
Uma baahnid inaad ka walwasho fayrasyada. Ama waxay dhahaan, ejejje
Ubuntu waa lacag la’aan , inaan u adeegsanno, u qaybinno waxna uga beddelno sida aan jecel nahay haddii aan helno aqoon ku filan
Haa waad ka fikireysaa ubuntu sidoo kale waa bilaash
Faa'iido darrooyinka Ubuntu.
Waa hagaag, runta ayaa ah inay jiraan waxyaabo yar yar badankooduna ay yihiin maxaa yeelay waxaan la qabsanay daaqadaha illaa iyo markii aan dhalanay.Inkastoo deegaanku aad u fudud yahay, waa inaan lumino 1 ama 2 saacadood si aan u aragno halka aan wax walba ku haysanno.
Waan hubaa inay jiri doonaan dad, xirfadlayaal u baahan inay isticmaalaan Photoshop, autocad, ama barnaamij kale oo ay u baahdaan. laakiin boqolkiiba 95% adeegsadayaasha barnaamij kasta oo ubuntu ah waad samayn kartaa si isku mid ah. Weligay ma isticmaalin wax barnaamij ah ama 10% ka mid ah suurtagalnimadiisa.
Xiisaha xiisaha leh.
Sidee ku noqon kartaa iyadoo xafiiskeygu yahay daaqado ma furi karo .xlsx anigoo furan ku furan karo dhammaan? Haa xitaa waad ku badbaadin kartaa kordhinta aad doorbideyso.
Waxaan ka hadlayaa Ubuntu, Ma aqaano sida kale ee loo qaybiyo Linux, waxaa macquul ah inay jiraan waxyaabo aad u dhib badan oo la isticmaali karo oo laga yaabo inay ka yar yihiin, waxay si fiican uga hadlaan Mandriva.
Haddii aad rabto inaad bedesho, arag inaad haysato ikhtiyaarro waxa aad badanaa isticmaasho, kiiskeyga xafiiska, maareeyaha soo dejinta, biraawsar, tifaftiraha sawirka, tifaftireyaasha barnaamijka iyo wax kale oo yar. Aad ufudud, ahem
Waxa aan dhihi karo ayaa ah ilaa maanta ma badalo, isla marka aan wax yar ka ogaado Gimp formatting markale iyo pc dhan Ubuntu.
Cunto u sameynta xumbo saabuun oo waaweyn
Sida sander loogu sameeyo dirawal adag
Faallooyinka 20 ee "Aragtidayda ugu horreysa ee Ubuntu"
Sebtember 10, 2010 saacaddu markay ahayd 9:34 am
Waxaan kuugu hambalyeynayaa isku dayga Ubuntu. Sidii ay horay u yiraahdeen waxaa jira waxyaabo badan oo qeybinta ah oo meesha ka jira, ugu dambeyntiina kan la doortay ayaa ah midka kaa dhigaya inaad dareento raaxo badan markaad shaqeyneyso.
Faa'iidada kale ee Linux waa in ay la jaanqaadayso mabaadi'da noloshayda, kuwaas oo iyaga ka mid ah ay wadaagaan. Daaqadaha ma sameyn kartid (waad awoodaa laakiin sharci ma ahan), halka Linux-ka ay haa tahay, taasi waa sababta aanan waligey u fahmi doonin sababta NGO-yada ay ula shaqeeyaan Windows, iyagoo awood u leh inay lahaadaan Linux oo ay ku siiyaan meel kasta oo ay aadaan.
Waqti ka dib waxaad la qabsan doontaa faahfaahin yar oo aad hadhow daaqadaha ka maqnaan doontid. Tusaale ahaan, cusbooneysiinta softiweerka, xasilloonida nidaamka, oo aan laheyn fayrasyo ​​(iyaga oo leh, laakiin waligey ma qaban), ...
Salaan oo ku raaxee nidaamka.
Sebtember 15, 2010 saacaddu markay ahayd 1:52 am
Waxaan isku dayay ubuntu nooca 8.04 ee ciyaaraha '64', markii ugu horeysay waxay ahayd waxoogaa niyad jab ah, waxaan ku adkaaday inaan isku hagaajiyo codsiyada qaarna kuma socon xawaare caadi ah (gaar ahaan meerayaasha meeraha ah sida stellarium ama celestia), si kastaba ha ahaatee, ma aanan aheyn niyad jabay oo aan la sii waday, ka dib waxa yimid 9.01, 9.04 iyo ugu dambayntii kacaankii dhabta ahaa ee 10.04, waa wax aad u wanaagsan oo aan ku rakibey 7.00 Gb disk, hadday tahay uun 7.00 waana mid aad u dhakhso badan, deggan oo xasilloon, wuxuu leeyahay firewall-ka ugu fiican waligay waan aqaanay Inaan xuso antivirus iyo aalado badan oo amniga ah. Shaqooyinka badan, waqtigaan qorayo xariiqyadan waxaan ku hayaa 3 tab tab oo Firefox ah, liis ay ku qoran yihiin fiidiyowyo leh VLC (haa waa isku mid daaqadaha) iyo aMule (haddii sidoo kale, xarafka ugu horreeya oo keliya is beddelo) oo kaliya 512 RAM, Sempron 2800+ (socket 754) iyo video sis isku dhafan, oo qaraami run ah. Marka laga hadlayo ciyaaraha, waxaad ka ciyaari kartaa ka caadiga ah Atari 2600 pacman, iyada oo loo marayo mame ilaa dhab ahaan dalbashada cayaaraha asaliga ah sida fagaaraha shisheeyaha, taas oo si muuqata u baahan qaar ka mid ah nvidia aasaasiga ah ama guddiga si ay ugu shaqeeyaan qaab aasaasi ah. Sikastaba, hadaan sii wado qorista faa iidooyinka iyo astaamaha, ma dhamayn doono, kaliya waxaan ubaahanahay inaan kula talinno xitaa eeyga deriska si aduunku runti xor u yahay.
Sebtember 10, 2010 saacaddu markay ahayd 11:08 am
Waxa run ahaantii dhaca, waa in Windows sidoo kale lacag la'aan yahay ... Taasi waa sababta ay wali dadka badan ugu kacdo inay u wareegaan Linux, haddii aan bixin lahayn waxa asalka ah software-ka ganacsiga. Linux wuxuu ku dambeyn lahaa helitaanka dhulka.
Laakiin waa inaad noqotaa mid macquul ah, jabsashadu waa boqorka, ma aqaano cid iibsatay Windows-kii asalka ahaa, ama xafiiska ama Photoshop, oo ka yar haddii mid gaar loo leeyahay, maahan shirkad.
Ubuntu ma dhammeyso inay la wareegto suuqa oo dhan, maxaa yeelay runti waxba kama tareyso tirada badan ee isticmaaleyaasha. Waa murugo laakiin waa run.
Sebtember 10, 2010 at 2:49 pm
Bilaash ah ??
Kumbuyuutar kasta oo horay loo rakibay Win wuxuu bixiyaa rukhsadda u dhiganta, kaalay, maalmahan, dhammaan laptop-yada suuqa ku jira (marka laga reebo kuwa sharafta leh marka laga reebo laakiin fiiri khadka tooska ah oo arag sida ay u adag tahay helitaanka laptop-ka Linux).
Sidaa darteed, Win xitaa ma aha lacag la'aan ...
Sebtember 10, 2010 at 4:58 pm
Waxaan doonayay inaan ku daro inay sidoo kale ku jirto qaybinta Tuquito GNU Linux. Tani sidoo kale waa Nidaam Hawlgal oo bilaash ah laakiin waxay leedahay farqi aad u weyn (ugu yaraan aniga ahaan) marka loo eego kuwa kale, waa Argentine (Tucuman inuu noqdo mid sax ah). Faa'iidada kale ayaa ah in si bilaash ah looga soo dejisan karo internetka (http://www.tuquito.org.ar/), keydso oo u isticmaal adiga oo aan rakibin.
Waxay rabaan inaad kala soo baxdo oo aad sameysid saddex nuqul oo kale, maadaama ay bilaash tahay oo ay kuu fidinayso faa'iidooyin kale oo aad u wanaagsan sida "naqshadeyso Tuquito con Garfio kuu gaar ah"; Nuquladaan waxaa la siiyaa asxaabta, asxaabta, qoyska, iwm. oo markiisa, mid kasta oo hela nuqul, wuxuu sameeyaa sadex nuqul oo kale wuuna siiyaa, waana sidan habka ficilku u faafo.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, ii qor, (Waxaan isku dayay anigoon rakibin waana fiicantahay ...). Salaan !!!
Sebtember 14, 2010 saacaddu markay ahayd 1:42 am
Ku dhiirrigelinta inaad soo gasho adduunka Ubuntu
Ubuntu maanta waa laga yaabaa inay tahay tan ugu fudud ee la adeegsan karo ee hadda jirta, waana sababtaas sababta in badan oo ka mid ah dirooyinka cusubi ay u soo baxaan iyada oo ku saleysan.
Kaliya waxaan kugula talinayaa, haddii aad rabto inaad soo gasho adduunka linux, inaad u guurto distros kale oo aan ku dhaafin wax walba saxan, salaan!
PS: waxa aad ka leedahay pendrive, xaqiiqdii ma aadan isku dayin Damn Small Linux (DSL) ama Slitaz (30mb: O).
Way fiican yihiin waxaanan kula talinayaa iyaga: P
Sebtember 13, 2010 saacaddu markay ahayd 12:21 am
Aad ayaan ugu faraxsanahay inay jiraan dad iyaguna la wadaaga khibradooda Linux. Waxaan u qoray Ubuntu 10.04 seddex isbuuc ka hor qaybinta oo ay weheliso Windows, "tijaabinta." Kadib waxaan ogaaday Linux Mint 9 (gnome) waana jeclahay, aad iyo aad bayna u tahay OS-kayga waxwalba, kombuyuutarka waan kadiyaariyay kumbuyuutar Windows-ka ma sii isticmaali doono.
Hadda waxaan ku rakibey PCLinuxOS mashiin farshaxan ah waxayna ila tahay wax cajiib ah. Sikastaba, sheygiisa ayaa ah inaad raadiso oo aad hesho distoorka aad ugu jeceshahay ee kugu habboon baahiyahaaga.
Iyo hambalyo boggaaga! Waxaan jecelahay inaan marba mar u hakado oo aan akhriyo, waa farxad.
Sebtember 23, 2010 at 6:12 pm
Seddex sano ka hor ayaan rakibay Ubuntu, cabsi badan ayaan adeegsan jiray, DD-ga ayaa dhintay, dib-u-dhiska ma aanan soo dejisan, maanta ka akhrisashada Blog-ka waad i dhiirrigelineysaa, mar dhow ayaan la kulmi doonaa Kubuntu mahadsanid.
Oktoobar 18, 2010 at 3:05 am
Waa hagaag runta ayaa ah inaan kaliya isticmaalay Linux markii aan u baahdo inaan ka soo ceshto feyl kombiyuutar aan daaqaduhu ka shaqeyn. Waxaan isticmaalaa barnaamijyo aad u gaar ah, sida autocad, autodesk inventor, shuqullo adag, matlab, marka la soo gaabiyo barnaamij gaar ah oo ka shaqeeya daaqadaha hoostiisa, ma aqaano sida loola ordo barnaamijkaas aad leedahay waa in lagu socodsiiyaa barnaamijyada daaqadaha Ubuntu laakiin runta aniga khatar kama gelin, shaqada kale ee kumbuyuutarkaygu waa ciyaaraha, iyo jiilkii ugu dambeeyay, runta uma maleynayo in markaan ku hoos wado Ubuntu ay isiiyaan isla natiijada. Nidaamka aaminka ahi aniga ima qancin karo, markii uu jabsade khamaariiste damco inuu weeraro wuxuu ku samayn doonaa server hoostiisa daaqadaha ama mid ka hooseeya Linux, qof walba way ku samayn karaan, marka aniga ahaan aniga ikhtiyaarka ugu fiican ee aan ugu wareegi karin ma jiro Linux
Noofambar 3, 2010 saacaddu markay ahayd 5:34 pm
Waxaan xiiseynayay nidaamka penguin-ka markii saaxiibaday shaqadeedii u guurtay barnaamij bilaash ah gebi ahaanba, habeenki; oo wuxuu bilaabay inuu igala hadlo sida ugu dhakhsaha badan wax walboo ku jiray Linux.
Hagaag, waxaan bilaabay inaan isku dayo waana fiicneyd. Waxa ugu dambeeya ee aan sameeyay waxay ahayd isku day kubuntu 10.10, aad ayaan u jeclahay. Weli waxaa jira waxyaabo aan jeclaan lahaa inaan ku beddelo interface-ka, laakiin waxa wanaagsan ee ku saabsan Linux waa sida loo qaabeyn karo: Waxaan sameyn karaa ku dhowaad waxaan rabo.
xun, maxaa yeelay weli ma aanan helin (iyo / ama iskuma dayin kuwa kale) barnaamijyo wanaagsan oo ii oggolaanaya inaan gebi ahaanba ka baxsado qolka Adobe isla; sida sawir-qaadaha tusaale ahaan, waxaan isku dayay xara xad-dhaaf ah (heer sare), laakiin waxay u badan tahay sida 'corel', sidaa darteed way igu adag tahay; iyo wixii ka dambeeya saameyn iyo flash wali waxba ma helin.
habka, usbuucii la soo dhaafay ma garanayo waxa aan sameeyay ee aan ku raray güindos (wax la yaab leh), laakiin hadda iima oggola inaan mar kale rakibo, sidaas darteed waxaan kaliya ku leeyahay kubuntu laptop-ka ;-) oo waxaan u isticmaalaa kaliya daaqadaha shaqo, taas oo ah waajib.
July 14, 2011 saacadu markay tahay 6:25 pm
Waxaan kugula talinayaa inaad tijaabiso KDE haddii kombiyuutarkaagu xamili karo (Waa nooc ka mid ah noocyada ugu culus Linux), aniga ahaanna waa kan ugu fiican.